Baarayaasha Canshuuraha ee Irish waxay ku qabteen € 110.000 Daroogooyinka, Xashiishadda iyo Kiniiniyada Xarunta Boostada Dublin • Dawooyinka Inc.eu
Lacag lagu qiyaasay, 110.200 ayaa shalay lagu qabtay xafiiska boostada Dublin. Saraakiisha canshuuraha ayaa daahfurka maanta sameeyay, iyagoo gacan ka helaya eey dabagal ah oo lagu magacaabo Bailey, intii lagu jiray hawlgallada caadiga ah.
In ka badan 7,5 kg oo daroogo kala duwan ah ayaa la soo helay, oo ay ku jiraan xashiishadda geedaha ah, xashiishadda la cuni karo, xashiishka xashiishka, xashiishadda iyo saliidda saliida butane, iyo 70 reefers. Wakiillada ayaa sidoo kale qabtay in ka badan 1.000 kiniin, oo ay ku jiraan zopiclone, benzodiazepine iyo diazepam.
Eeyga dambi baarista ee Bailey ayaa ka helay daroogada qiimaheeda € 110.000 in Xarunta Dublin Post (afb.)
Daawooyinka waxaa laga helay 46 xirmo oo kala duwan oo ka yimid Boqortooyada Ingiriiska, Isbaanish, Mareykanka iyo Kanada.
Baakadaha boosta ayaa loo aqoonsaday inay yihiin 'nacnac', 'dhar', 'ciyaaro', 'istiikarada galoofyada feedhka', 'waraaqaha', 'shaaha' iyo 'nalalka gudaha ee baabuurta' waxaana loo diray meelo kala duwan oo Ireland ah. Waxaa la soo sheegay "Marka shirkadaha ama dadka ay hayaan wax ay ka soo sheegaan ka ganacsiga daroogada, waxay la xiriiri karaan iyaga oo aan la aqoon". Kormeerayaasha canshuuraha ayaa sheegay in baaritaanada ay socdaan isla markaana qabashada ay qeyb ka tahay howlgalada socda ee lagu bartilmaameedsanayo soo gelinta daroogada sharci darada ah.
Ilaha ay ka mid yihiin IrishTimes (EN), Dakhliga (EN), Joornaalka (EN)
cannabisdembidaroogadaIrelandcilmi baarisSpainBoqortooyada IngiriiskaMaraykanka
La-taliye xagga siyaasadda daroogada ah oo ka socda magaalada Vancouver ayaa ka digaya daroogooyinka waddooyinka halista ah ee saameynaya kaydka sharci-darrada ah ee Ingiriiska ...
Laba wakiil oo ka tirsan Aqalka Dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa shalay soo bandhigay sharci ay…
Boqortooyada Ingiriiska - Boqolaal dhir xashiishad ah ayaa laga helay kaniisad aan la isticmaalin oo ku taal ...